Muxuu Mino Riola ku jawaabay markii wax laga weydiiyay mustaqbalka Paul Pogba ee garoonka Old Trafford? – Gool FM
(England) 18 Luulyo 2019. Wakiilka aysan jecleen badi kooxaha qaaradda yurub ee Mino Riola ayaa ka hadlay mustaqbalka Paul Pogba ee garoonka Old Trafford isagoo ku sugan wadanka talyaaniga, waxaana la fahmay inuu si dadban u xaqiijiyay joogista xiddiga reer France.
Paul iyo wakiilkiisa ayaa horay saxaafadda ula wadaagay sida ay u damacsan yahiin ka dhaqaaqista Old Trafford, waxaana si weyn loola xiriirinayaa kooxaha Real Madrid & Juventus.
Si kastaba Red Devils ayaa weydiisatay koox walba oo dooneysa xiddigaan adduun dhan 150 Malyan oo Pound, Riola ayaana si dadban u qiray iney macquul tahay sii joogista Paul ee garoonka Old Trafford mar saxaafadda Italy ay arrinta xiddigaan wax ka weydiiyeen.
“Wali waxba ma jiraan, joogistaanka Man United? waxaan maalinba maalinta xigta ku noolahay nolosheyda, waan arki doonaa wixii dhaca” ayuu yiri Riola.
“Dhamaadka sheekadaan wali lama qorin, maanta halkaan ayaan joognaa, ma garan karo wixii berito ku saabsan”
Paul wuxuu heystaa heshiis saddex sano ah.